Ọgwụ na ịkpụzi - Chapman Technology Co., Ltd.
Akụkụ na-aga nke ọma na-amalite site na ịkpụzi nke ọma. Usoro a gbagwojuru anya ma kwụ ọtọ na-ekpebi akụkụ nke nrụpụta ihe na ndụ ndụ ma na-eburu n'uche isi ihe eji ebu ebu ma na-agbaso nkọwa pụrụ iche nke akụkụ.
Echere otu n'ime isi ise anyị ga-enwe ihe ịga nke ọma, nhazi usoro kwesịrị ekwesị na ịkpụzi ụlọ ga-enyere aka belata ọnụahịa, bulie ogo ma bulie arụmọrụ. Onye kere Chapmanụlọ ọrụ nwere ike ịkwado ọtụtụ ngwa ngwa ngwanrọ, gụnyere UG, PROE, CAD, SOLIDWORKS na na. N'ezie, anyị nwere ike ịnye gị ọtụtụ ụkpụrụ ịkpụzi ebu: DME, HASCO, MEUSBURGER, LKM ， yana moldflow analysis inyocha niile ebu aghụghọ na akụkụ tupu mmepe.
Onye kere Chapman ịkpụzi ụlọ ọrụ na-enye mgbanwe na-agba ọsọ niile ụdị thermoplastic ihe. Anyị nwere ọkachamara n'ichepụta ngwaahịa maka ọtụtụ ngwa yana maka ụlọ ọrụ akọwapụtara gụnyere Automobile ， ahụike, akụrụngwa eletriki, njikọta, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nchekwa, njem, na ndị ahịa.
Onye kere Chapman Companylọ ọrụ nwere igwe ogwu si na 90 ruo 600 tọn, Anyị nwere ike inyere gị aka n'ịkwalite ma melite ngwaahịa gị iji mezuo nsonaazụ kachasị mma iji mezuo ihe ị chọrọ.
Core Nkedo ikike
1.Large mgbagwoju Nkedo
2.Small nkenke nkenke
3. Fanye ịkpụzi na N'ime ịkpụzi
4.LSR & Rubber ịkpụzi
Ndị otu anyị na Onye kere Chapmansoro ndi ahia anyi na - aruko oru iji nye ndi oru ahia ihe bara uru. N'okpuru ebe a bụ ole na ole n'ime ọrụ ndị a bara uru:
• Multi-akụrụngwa Mgbakọ
• Ebu Ndozi & Mmezi
• Ebuzi Nyefee Mmemme na usoro
• Ultrasonic ịgbado ọkụ
• Kanban, Mmemme Nchekwa, wdg.
• Nye aka na Mgbalị Nsị
• Akụkụ Dechọ Mma
• Omenala agba na agba agba ọsọ ọsọ